Puntland iyo Somaliland oo qarka u saaran inay madaxa isla galaan iyo madaxweyne Siilaanyo oo weli ku sugan Laascaanood – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Puntland iyo Somaliland oo qarka u saaran inay madaxa isla galaan iyo madaxweyne Siilaanyo oo weli ku sugan Laascaanood
Wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa sheegaya in halkaasi ay ka jirto xiisad kacsanaan oo aad u xoogan, taas oo timid kadib markii maalintii shalay uu magaalada Laascaanood safar ku tagay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Axmed Siilaanyo).
Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo haatan safar ku maraaya deegaano iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Sool, ayaa socdaalkiisa kusoo beegmaya xilli uu gobolkaasi ka jiro khilaaf aad u xoogan oo u dhaxeeya maamulada Somaliland, Puntland iyo Khaatumo oo haatan wada-hadalka kula jirta Somaliland.
Sidoo kale, deegaanadda ku yaala gobolka Sool ee la doonayo inuu Axmed Siilaanyo gaaro ayaa waxaa ka ag-dhow ciidanka maamulka Puntland, waxaana sida la sheegayo ciidankaasi la geliyay heegan aad u xoogan.
Meelaha ay xiisadda ugu weyn ka taagan tahay ayaa sida la sheegayo ka mid ah degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaas oo lagu wado inuu gaaro madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Waxaa dhawaan degmada Taleex ka dhacay dagaalo u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland, iyadoona dagaaladaasi ay ka dhasheen qasaare aad u xoogan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac.
Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa sheegay inaysan marnaba u dulqaadan doonin daan-daansiga ay Somaliland ka wado deegaanada gobolada Sool iyo Cayn.
Puntland ayaa ka digtay cawaaqib xumidda ka imaan karta daan-daansigaasi uu mas’uuliyadeeda qaadi doono madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo.
Si kastaba ha ahaatee, xiisada ka taagan gobolka Sool ayaa kusoo beegmaysa xilli uu magaalada Laascaanood ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Axmed Siilaanyo), wuxuuna halkaasi kulamo la qaadanayaa saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaaladaas.